Ahoana ny fomba hamoronana sary kisary tsara endrika ao anatin'ny segondra | Famoronana an-tserasera
Marc Edwards avy amin'ny tranonkalany mampianatra antsika hamorona sary masina ao anatin'ny segondra vitsivitsy miaraka amina andian-GIF. Afaka segondra vitsy dia ho fantatrao ny fomba namoronana ireo sary masina mahafinaritra izay misy ny tranokalan'ny kisary sasany mba hampidirana azy ireo amin'ny asanao manokana ho mpamorona endrika.
Ary ny marina fa mahavariana fa mora be Ary mora tokoa ny manao azy ireo amin'ny Adobe Illustrar. Ny fahalalana ny fampiasana ireo fitaovana matevina ireo, amin'ny alàlan'ny fanaovana fitaratra saika andalana sasantsasany, dia afaka manana fo tsy mila kitihina kely fotsiny isika mba haka endrika miolaka kokoa.
Mampiseho haingana ny dingana efatra raisina mba hamoronana fo lavorary. Mila mikasika ny vatofantsika kely fotsiny isika vao manomboka mamolavola ny sisin'ny fo.
Raha atotaly dia misy sary mihetsika 79 an-tsary izay azonao jerena ao amin'ny tranonkalany antsoina hoe Bjango. Afaka mahita avy amin'ny volombava iray ho an'ny marika Wi-Fi, ary koa ny famoronana ny sary famantarana Apple sy ny maro hafa izay hanompo anao tsara amin'ny asanao manokana.
Avelanay miaraka aminao ny sasany amin'ireo GIF ireo ao anatin'ny segondra vitsy Hisokatra ao an-tsainao ny hakingan'ity artista mpanaingo ity. Ankehitriny dia mila manandrana manome ny fifandraisanao amin'ny zavatra rehetra ampianarina ianao.
Ary betsaka izany, ao anatin'ny segondra vitsy, mampiseho an'i Edwards miaraka amin'ireo GIF ireo tsy mahatratra 30 segondra akory izany. Fomba lavorary ahazoana fiheverana be dia be ary hampahafantatra ny tenanao amin'ny fotoana izay ihamaroan'ny mpanakanto manatona ny Internet hampiroborobo ny tenany.
Una fampianarana ampianarin-tena de mampiasa saina fotsiny ary te hianatra amin'ny andiana GIF izay afaka manazava ny fisalasalana maro momba ny famoronana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mamorona haingana sary masina be dia be miaraka amin'ny fanampian'i Marc Edwards
Arthur Vl dia hoy izy:
Valiny tamin'i Arturo Vl
Kitendry hitsin-dàlana hitsitsiana fotoana miaraka amin'i Illustrator